Abe-ANC benze ubuqaba: umhlaziyi | Isolezwe
Abe-ANC benze ubuqaba: umhlaziyi
Isolezwe / 6 February 2013, 10:22am / CELANI SIKHAKHANE
AMACULU namavuvuzela ebfuthwa kufika iDA kwaSwayimane kuculwa nengoma ethi Nqonqonqo wozwana nathi kufika kutheleka leliqembu kulendawo ISITHOMBE BONGANI MBATHA
UMHLAZIYI wezepolitiki ozimele KwaZulu-Natal uthi isenzo sokuziphatha ngendlela enodlame kwamalungu e-ANC abexosha abantu be-DA ngezilimazo kwaSwayimane ngoMsombuluko siyizinkomba zezinga eliphezulu lokungabekezelelani kwezombusazwe esifundazweni.
UMnuz Zakhele Ndlovu ukhulume kanje ngesikhathi ephawula ngesenzo esisha samalungu kaKhongolose nabaholi bendawo bevuka umbhejazana bevimba abaholi be-DA ngocelemba namahalavu kwaSwayimane.
UNdlovu uthe lesi senzo sihambisana nokungafundiseki kahle kwabantu ngezombusazwe futhi siyethusa ngoba i-ANC nayo phambilini ibihlale ikhononda ngokuxoshwa ezindaweni ebezaziwa ngezizinda ze-IFP esifundazweni.
“Lokhu akugcini nje ngokubuyisela isifundazwe sethu emuva ezikhathini zodlame nokulwa kubangwa amaqembu kodwa kubeka kabi nabantu abamnyama ikakhulukazi abase-KZN indlela abasaziphatha ngayo nabasabuka ngayo ipolitiki. Ngabe kungcono ukube umndeni kagogo owadlwengulwa yiwona obuvimba i-DA kodwa kudumazile ukuthi abaholi namakhosi yibona abanqume ukuzihlanganisa nalesi senzo,” kusho uNdlovu.
Uthe okuxakayo wukuthi isizathu sokuvimba i-DA asizwakali kahle ngaphandle kokuthi abantu bebethi ababafuni abelungu kwaSwayimane ngoba bangabacindezeli.
UNdlovu uthe akukapheli nesikhathi esingakanani i-ANC ikhononda ngokuvinjwa kwe-ANCYL eyayifuna ukuyokhankasa emzini kaDkt Mangosuthu Buthelezi eMahlabathini ngo-2009 kodwa konke lokhu sekwenziwa yiyo i-ANC.
“Lokhu abakwenzayo kungubuqaba ngoba yiyo i-ANC eyaziwayo ngokulwa nalabo abangafuni muntu ezizindeni zabo. Ngakho i-ANC kumele ilusukumele lolu daba ngoba i-DA iyiqembu eliphikisa ngokusemthethweni kuleli futhi elisebenza ngaphansi kwenqubo kahulumeni wentando yabantu,” kusho uNdlovu.
I-DA ibihambele kwaSwayimane iholwa wuNksz Lindiwe Mazibuko ukuyozwa izikhalo zabantu abadala ngendlela abadlwengulwa ngayo ukuze udaba lubhungwe ephalamende.
Ubephelezelwa uNkk Dianne Kohler Barnard, umkhulumeli we-DA kwezokuPhepha, uMnuz Sizwe Mchunu, ohola i-DA eKZN, uNksz Mbali Ntuli usihlalo wentsha yeqembu.
UNobhala we-ANC eMoses Mabhida Region, uMnuz Supa Zuma, uthe i-DA ayizange ixoshwe yi-ANC kodwa ivinjwe wumphakathi.
“Ngisho ikhansela ebelikhona kule nto ebiyenzeka kwaSwayimane belizizele njengelungu lomphakathi ngoba i-ANC ibingahlele lutho mayelana nokuvakasha kwe-DA kuleya ndawo ngakho akungahlanganiswa izinto ezingahlangene. Usho ukuthi namakhosi lawa abekhona ayi-ANC? i-DA ayingahlanganisi izinto ezingahlangani ngoba izifunela udumo,” kusho uZuma.